Mhando dzakakurumbira dzembatatari muKrasnoyarsk Territory dzakazivikanwa - "Potato System" Magazini
Pakukohwa 2021, 11,1 zviuru zvematani matatata zvakasimwa muKrasnoyarsk Territory, mairi 49% aive emabhizimusi ekurima, uye 51% aive mapurazi evarombo uye mamwe mabhizinesi. Mugove wemhando dzakasiyana mbeu yaive zviuru zvina mazana mashanu nezviuru (4,4%). Iyo hombe yemapatata asiri emhando dzakasiyana (40% yeiyo yakazara) yakasimwa nemapurazi evarombo uye mamwe mabhizinesi.
Usati wadyara, 63% yembeu mbatatisi yakaedzwa yekudyara mhando mumatunhu uye epakati-matunhu madhipatimendi ebazi reFederal State Budgetary Institution "Rosselkhoztsentr" muKrasnoyarsk Territory. Zvese zvakaedzwa mbeu yezvinhu zvakasangana nezvinodiwa zveGOST. Pakati pembeu dzemhando yepamusoro dzematatata, mbeu dzekubereka dzinoumba zvikamu makumi masere nemasere kubva muzana (81%), yekutanga (11%) uye zvikamu zvepamusoro zve8%
Varimi vembatatisi vemudunhu vakashandisa 26 mhando dzekudyara (gumi mhando dzezvipfuyo uye gumi nematanhatu marudzi ekunze kusarudza). Kunyangwe paine huwandu hwakaenzana hwemhando dzekunze nekune dzimwe nyika, mavhoriyamu anosiyana zvakanyanya - mugove wemarudzi ekunze unosvika zvikamu makumi manomwe nemapfumbamwe kubva muzana zvezvirimwa zvakasiyana-siyana zvakadyarwa, uye mugove wezvipfuyo - 10% chete. Panguva imwecheteyo, zvichienzaniswa ne16, mugove wemhando dzemumba wakawedzera ne79%.
Pamarudzi ekunze, anonyanya kufarirwa pakati pevarimi vekurima vemudunhu ndeaya anotevera marudzi: Gala, Vega, Colomba, Mambokadzi Anna, Red Scarlett, Rosara. Panguva imwecheteyo, mumakore achangopfuura, huwandu hwembatata dzakasimwa dzemhando dzakasiyana Koroleva Anna uye Red Scarlett dzakapetwa kaviri. Pamhando dzepamusha, Tuleyevsky neTanay mhando dziri kudiwa gore rega rega.
Kupa varimi vekurima veKrasnoyarsk Territory nematunhu akavakidzana nemhando yepamusoro mbatatisi mune rimwe rematunhu epakati (Sukhobuzim), LLC SPH "Dary Malinovki" inoshanda, iri kuita yekutanga vitro mbatatari kugadzirwa kwembeu uye kurimwa kwemaminitubers. Muna 2021, 0,9755 matani emaminituber emhando gumi nembiri yematatata akarimwa munzvimbo dzekuchengetera pane imwe nzvimbo ye60,64 mahekita. Mazhinji marudzi eRussia mavambo: Gulliver, Vympel, Krasa Meshchera, Meteor, Sadon, Violet, Favorite, Fritella. Uye zvakare mhando ina dzinobva kuNetherlands: Innovator, Colomba, Lady Claire, Red Scarlett. Gore rinotevera, SPH Dary Malinovki LLC inoronga kuwedzera kugadzirwa kwemaminitubers.
Tags: Krasnoyarsk Territorymbatatisi mitundu